Haynes kwaye Boone sesinye likhulu kwaye uzile-lokukhula umthetho firms kwi-U.SZethu ifemi ikholelwa ukuba ihlabathi ishishini ngowethu iinkampani keen ukuba compete, ukukhawuleza adapt, eager ukuba mamelani kunye nokufunda, kwaye kugqitywe ukuba ngamaxesha onke umngeni ngokwabo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa.
Nceda khangela kwiwebhusayithi yethu ethi ngolwazi oluthe vetsheApha siya babonise indlela CABAM zingasetyenziswa ukuchonga na igama eyenziweyo Oku kwenziwa ngenxa yokuba ukuba iingxelo-mali kwaye zokusebenza ulawulo abanalo isebenza kakuhle, nayo ayikwazi kukhokelela-mali ilahleko. Masithi nguye ihlawulwe kwi ezithile mini nganye ngenyanga kwaye ihlawulwe ngokuchanekileyo kuba iinyanga, kodwa ke resigns ekupheleni abo kwiinyanga ezintandathu. Ukuba lowo uqhubekeka kuhlawulwa kwi-kwiinyanga ezilandelayo, CABAM uza chonga esi phezulu kwaye ukuchonga oku njengoko i-anomaly njengoko yena akufunekanga bayamkela ezi intlawulo.
Ezikhethekileyo Investigator Inika Ixilongo Layo Abaqondisi-Mthetho Imibuzo Kwi-Russia Nabo
I-New York Phinda-phinda uchaze ukuba U.S
Ezikhethekileyo Ingcebiso Urobert Mueller sele inikwa uluhlu imibuzo ukuze abaqondisi-mthetho kuba Umongameli Donald ixilongo layo njengenxalenye yakhe uphando kwi alleged Russian meddling kwi- unyulo kwaye nokuba ixilongo layo obstructed ubulungisaI-Phinde kusini na ngoaprili ukuba zifumane uluhlu imibuzo, apho aqala kwi yintoni baba ixilongo layo ngu motivations kuba firing FBI Umlawuli Uyakobi Comey ngonyaka eyadlulayo ntoni nabo ixilongo layo ngu phulo kokuba kunye Russians.
Ixilongo layo ngu abaqondisi-mthetho kufuneka ukuba kwehla uluvo ngomahluko ingxelo.
Ixilongo layo tweeted kwi- Meyi ukuba kwaba 'disgraceful ukuba imibuzo. baba 'leaked' namajelo eendaba. 'Phinda-Phinda wathi investigators bahlala anomdla nokuba ngaba umongameli u-iintshukumo eyiyo obstruction lobulungisa kwaye ufuna ukuba enze udliwano-ndlebe naye malunga eziliqela episodes kwi-ofisi. Abaninzi imibuzo zafunyanwa lisebe newspaper umbindi kwi obstruction mba, kuquka yakhe jikeleziso ukuba Lamagqwetha Jikelele Jeff Iiseshoni' recusal ukususela Us uphando, isigqibo ixilongo layo sele angrily criticized. Kunyaka omnye umbuzo zafunyanwa lisebe phinda-Phinda, Mueller ucela ntoni ixilongo layo wayesazi malunga phulo abasebenzi, kuquka yakhe yangaphambili phulo-Sihlalo Upawulos Manafort, reaching phandle Moscow. Omnye umbuzo ucela ntoni na iingxoxo ixilongo layo enokuba waba malunga intlanganiso kunye Russian Umongameli Vladimir Putin. Omnye umbuzo ucela ntoni umongameli enokuba ezaziwayo malunga a kunokwenzeka umzamo ngunyana wakhe mthetho, Uyerede Kushner, kumisa emva isiqhagamshelanisi ne-Russia phambi ixilongo layo ngu wokubekwa. Mueller kanjalo wabuza malunga a juni kwintlanganiso ngomhla ixilongo layo Kwencopho nge-Russian lawyer umnikelo ukonakaliswa ulwazi unyulo rival Hillary Clinton, phinda-Phinda wathi. Omnye umbuzo sibuza ukuba ixilongo layo wanikela a pardon yakhe yangaphambili wesizwe ukhuseleko unxibelelane nomcebisi kwezezimali othembekileyo, Michael Flynn, abo wenziwe ibe igcwalisiwe yi-Mueller kunye ethiwe kwaye bakholelwa ukuba abe cooperating ne-Russia uphando. RFE RL journalists ingxelo iindaba kwi- iilwimi kwi- amazwe apho free cinezela ngu ukugxotha yi-government okanye hayi ngokupheleleyo obububo. Thina ukubonelela yintoni abantu abaninzi akukwazeki ukufumana ekhaya: uncensored iindaba, unoxanduva ngxoxo, vula ngxoxo-mpikiswano.
Ngaba Isibheno Libazisa a Isihlalo
Ukuba ifayile isibheno a isigwebo ngokuchasene nani, ukumbule ukuba yakho isibheno akusebenzi necessarily kuthintela ukuba isihlalo ukusuka ekubeni bamthwala ngaphandleNgelixa inkqubo esemthethweni unika amaqela ithuba lokwenza isibheno isihlalo, akekho ube ujonge ukwenza njalo njengoko i-avenue ukuphepha ukuhlawula okanye sentencing. Ukuze postpone yakho isihlalo ngexesha isibheno, kufuneka kunikelwa a hlala womgwebo yi-ijaji. Xa uqinisekile ukuba akukwazeki ukufumana hlala womgwebo, nibe kwakhona ifayile isibheno, kodwa nibe kufuneka begin yakho isivakalisi okanye imali yakho isihlalo nokuba isibheno nkqubo. Umsebenzi kunye umtshutshisi abantu abaqhelekileyo kunye nezibheno inkqubo ngeenkcukacha na okanye hayi isigwebo ngokuchasene nani ngu foliso okanye usetyenzisiwe xa ufuna zilindele yakho isibheno. Ukuba qho ngonyaka kuba yakho isibheno kukuba isihlalo isixa-mali yi-excessive okanye ukuba opposing umntu waba ngokungalunganga wanika isihlalo, kufuneka akwazi ukufumana hlala ka-isihlalo. Inkundla iya kunika imiqathango ye-hlala, okuthetha ukuba inkundla unako ukumisela umhla othile kuba hlala, iimeko, kwaye ukuba iimfuno ezithile inkcazelo yobuqu kutyhilwa ukuze kuba hlala womgwebo ukuba zenzeke. Ukuze ufumane hlala womgwebo kuba mali kweelwimi ngexesha isibheno, wena ikholisa kufuneka ifayile i-dibaniso iziqinisekiso intlawulo a imali kweelwimi okanye ngenye indlela indemnifies iqela ekuqaleni awarded umonakalo othe. I-hlala womgwebo kusenokuba kumaqhosha na uhlobo womgwebo, hayi nje mali. Eminye imizekelo izigwebo ukuba inkundla ingayalela postpone ziquka restraining ukusebenzisa ipropati, wokugcina i ngenye indlela saliwe injunction, encumbering ipropati nge lien, kwaye uthengisa ipropati. Malunga isibheno a, ulwaphulo-mthetho isihlalo, iyahlala unako kanjalo kusetyenziswa kuzo, ulwaphulo-mthetho iimeko ngoko ke ixesha elide njengoko defendant ngu ungeniswe bail. Ulwaphulo-mthetho imirhumo unako kanjalo kumiswa phezu isicelo. Kufuneka uxwebhu lwezikhalazo kuba hlala womgwebo kwi isibheno kwaye anike ingxelo isiphumezi-miyalelo njengoko ukuba kutheni isicelo sakho kufuneka kunikelwa. Ukuba isicelo sakho ngu-wanika, inkundla iza ngokuqhelekileyo kufuna ezinye izenzo ezilungileyo nokholo yinxalenye umntu ucela i-hlala kwaye i-filing isibheno. Umzekelo, ukuba kukho imali isihlalo owed, appealing umntu abe kufuneka i-i-bond kuba isixa-mali. Ezongezelelweyo iimfuno babe involve uthengisa indlu enye umhlaba baze bafakwe i-mali kwi-i-akhawunti, kuthengiswa perishable ipropati njengoko kufuneka, okanye filing ngokwenene bond ukuba iquke na iindleko i-isibheno. Igqiba nokuba ngaba isibheno kwaye nokuba ngaba isicelo a hlala womgwebo yi tricky isigqibo ukuba kufuneka uxoxwa nge litigation lamagqwetha. Ezingachanekanga oyikhethileyo ayikwazi iziphumo inkundla ingxowa yakho isibheno frivolous kwaye efuna ukuba inzala kongezelelwa kwi iindleko isihlalo ukuba iquke ixesha ithathwe kuba isibheno. Xa ifayile isibheno kwaye isicelo a hlala womgwebo, kufuneka ube sanele isemthethweni beqiqa kwaye isiphumezi-miyalelo ukuba kuphela i-experienced lamagqwetha unako anike.
Ilungelo uqhankqalazo yindlela lunxulumano kumgaqo-Siseko kwaye Basebenze Ikhowudi ye-isirashiya njengokuba uthetha ukusombulula collective basebenza disputesNangona kunjalo, i-Russia basebenza protests nokuza phezulu kuba ngxoxo, kokukhona imibuzo kunokuba ugwayimbo. Kwiminyaka yakutsha nje inani basebenza protests kwi-Russia, kuquka ezahlukeneyo iifomu umsebenzi stoppage, sele ukwanda significantly kuthelekiswa edluleyo, kodwa inani ngokusemthethweni owamiselwa collective basebenza disputes kwaye ugwayimbo iye yahlala ngezantsi. Umthetho wepalamente kwi isisombululo ka-collective basebenza disputes kwaye iyanyuka ugwayimbo ngu iselwa restrictive kwi-Russia, kwaye yayo ukunyanzeliswa kanjalo ikhuthaza abasebenzi ukuba ufune enye iindlela settle collective basebenza iimpikiswano. Kukho abancinane empirical uphando kwi-matyala ukuphunyezwa kwezi norms kwaye impembelelo yayo kwi ukunyanzeliswa komthetho. Ke ngoko, oku iphepha analyses i-beqiqa eenkundla kwimicimbi iimeko kwi legality ka-ugwayimbo, babo iinkcazelo umthetho, kwaye ifuthe ezi zigqibo kuba ngomhla ukunyanzeliswa wepalamente kwi isisombululo ka-collective basebenza disputes kwaye ugwayimbo. Zethu elokugqibela kukuba iinkundla umthetho njengomnye restrictive impembelelo kwi isisombululo ka-collective basebenza disputes kunye nokusebenzisa unelungelo uqhankqalazo kwi-Us.
Arbitration Inkundla isibheno - Russian abaqondisi-mthetho
MAL baba ongasebenziyo ukuba ezinye umthetho precluded zabo isicelo imbambano kwi umbuzo kwaye ukuba ngokwesiqendu A Abasebenzi' Imbuyekezo Ummiselo banikela exclusive kolawulo lwesixeko kwi Wesithili Inkundla ukumelana bonke abasebenzi' imbuyekezo amabango ngaphandle kwi-amatyala osebenzayo ukuvumela excepted, ANangona Icandelo le- lomthetho i-guyana Ubumi Umthetho ubonelela ukuba Umphathiswa u-basebenzise yakhe discretionary amandla ale ukuba Ikomiti ngakumbi iqaphele lombhali ibango ukuba iingxaki kokuba kufumaneke ekuzameni exhaust domestic ulungiso ayikwazi eneneni kuba ascribed Urhulumente iqela ngokunjalo ukuba ingcebiso kwaye ukuba, lombhali zasekuhlaleni ibango ngokuchasene yakhe, (.). kwaye ngomhla ngokumnika a re-njalo umbhali"s meko, kwaye ke ngoko umbhali ayiphumelelanga babonise ukuba ikhona ichiza lezolimo, ukwimo isibheno ukuba zahlukeneyo inkundla, akazange kakuhle okanye waba objectively futile. Lwabagwebi yephondo, Ashkhabad Isixeko, jonga kwaye engaselunxwemeni iinkundla, ingaba ezicetywayo yi-Sihlalo lesiqu Inkundla kwaye wonyula Ngumongameli we waguqukela i-judgement ye-Administrative Inkundla, nokuxhasa isigqibo Umasipala kwaye Khawunti Yolawulo kwezigqibo amagunya kwaye iinkundla ayikwazi disregard umthetho okhoyo kunye nezinye izibonelelo xa assessing a building mvume mba, ukuba imvume yokwakha apho umbhali kokuba isetyenziswe contravenes i-sophuhliso kwaye ukuba enjalo komlinganiselo ayikwazi uqwalaselwe a encinci departure kwi-ndp.
Kuya kufuneka ukuba, nangona kunjalo, kuba kuchazwe ukuba ilungelo isibheno waba? limited kuba ngaphantsi ezinzima, ulwaphulo-mthetho offences, umzekelo, abo punishable nge kakuhle ka, crowns (malunga nama- euros) okanye ngaphantsi: kwimeko i-ngokuqhubekayo inkqubo yokuhlola imithetho ukuphucula kwabo, projekthi apho kuxhaswa nge-e-Australia kwaye e-United kingdom.
Ngokunxulumene kwisiqendu le ngxelo, Ukukhusela Amalungelo neenkululeko Wesizwe Minorities Umthetho permitted abantu belonging wesizwe, Ngexesha layo th ntlanganiso, ngomhla we- Kweyokwindla, Subcommittee kugqitywe ukuba mema, ngexesha labo isicelo, observers kuba Ibero-i-american Institute of Aeronautic kwaye kwi ukuqonda ukuba izakuba ngaphandle ukumona ukuba ezinye izicelo ukuba indalo kwaye okokuba ngokwenza njalo avume involve na isigqibo Ikomiti malunga isimo. Kwimeko apho imbambano phakathi abantu claiming kuba umonakalo pursuant ukuba Umthetho kwaye abantu netyala phantsi Umthetho, kwaye apho kuvunyelwene ngazo ngabo bobabini okanye onke amaqela, imbambano zibe owafakileyo. I-ukuqeshwa arbitrators: Malunga ukuqeshwa arbitrators bohlwaywe yi-nkqubo amanqaku, siphakamise ukudibanisa ukuba appointing umthetho osebenza ubutyebi ye imbambano ukuze ukuphepha ukuqeshwa arbitrators hayi incokola kunye enjalo imithetho leyo ingayalela ukuqeshwa ingcaphephe ngendlela esebenzayo imithetho ezikhokelela ukuya ukwanda iindleko arbitration kwaye nciphisa ka ukusebenza ngempumelelo arbitration.
Isirashiya Ezimbalwa Lokusebenza Wokuqhawula Umtshato Yi-Building Eludongeni Ngokusebenzisa Iziko
Njengoko ukuba akusebenzi khange odd ngokwaneleyo, ezimbalwa onayo ukuvunywa i-Russian iinkundla ngaphambi koko kulo nyaka malunga unyeEludongeni sele ukuqwalasela okuthethwayo ukuba yinxalenye-umnini Margareta Tsivtnenko ngu ngokupheleleyo ezivalekileyo ngaphandle basuke oluphezulu inqanaba ekhaya, njengoko kungekho staircase yayo nesiqingatha indlu. Margareta uthi yena asikwazanga kufumana ixesha okanye imali ukwakha yesibini staircase kokuba iqela le builders instructed nge umyeni constructed i-greynetic yezitena eludongeni."Nam kwaye nyana wam baba ekubeni a sakusasa xa builders weza endlwini, itsala kwi-iibhloko ka-ithe ngqo"yena wabhala kwi-Russian Lamagqwetha luhlomle kuwo."Inkundla esemthethweni weza kakhulu, armed ngengxelo esithi okokuba ndimele kuba wakha wam staircase yi-ngoku. I-wealthy ezimbalwa, abo bathe ezintathu abantwana kunye, ukwahlula ngo- kwaye kufuneka wachitha kangako yokugqibela ezintandathu kwiminyaka enkundleni ngokuchasene ngamnye enye. Xa wokuqhawula umtshato kwagqityezelwa inkundla ilungisiwe kwabo ukwahlula zabo zexabiso phakathi kwabo, kodwa zabo engundoqo asethi waba endlwini Moscow, kukunceda kakhulu jikelele $. Margareta wathi, isirussian media abazange ufuna ukuba uthengise indlu njengoko"- Russian real estate kwimakethi ngu kulo mbhodamo"kwaye baya wouldn khange kuba gotten elungileyo yaba kuba oko. Sergei Tsivtnenko ubomi babo ngendlela entsha apartment kunye yakhe entsha umfazi kwaye kuyanqaphazekaarely isebenzisa lakhe icala Moscow indlu.
ukuhlawulwa umonakalo kwi-Russian
Silifumene ezimbini iinguqulelo ka-ukuhlawulwa umonakalo kwi-isixhosa-Russian isichazi-magama kunye izithetha ntonye, iinkcazelo, imizekelo ukusetyenziswa kwaye ubizoNgo iyanikela unganceda kuthi ukwenza oku magama nkqu bhetele! Ungakhetha ukongeza uguqulelo ukuba alikafiki kwi-magama, okanye uyakwazi ivoti sele wacebisa ukuba iinguqulelo ekunene okanye engalunganga. Ngo iyanikela unganceda kuthi ukwenza oku magama nkqu bhetele! Ungakhetha ukongeza uguqulelo ukuba alikafiki kwi-magama, okanye uyakwazi ivoti sele wacebisa ukuba iinguqulelo ekunene okanye engalunganga.
Lawyer Russian Imisebenzi
kwaye uyavuma ukuba abe ixhuamne yi-abaqeshi nge Ngenene
Nceda qaphela ukuba bonke umvuzo amanani ingaba approximations esekelwe phezu wesithathu submissions ukuba NgeneneEzi amanani banikwa ukuba Ngenene abasebenzisi ngenjongo generalised uthelekiso kuphela. Ubuncinane aqhuba babe differ ngomoya ophantsi kolawulo kwaye kufuneka funda umqeshi kuba ukuthelekisa umvuzo amanani.
Isiturkish, Hebrew) ingaba enqwenelekayo
Kufuneka imvume ukuba kokufumana lentengiso imiyalezo esuka Ngenene kwaye babe opt ukusuka kokufumana eso imiyalezo balandele rhoxa ikhonkco wethu imiyalezo, okanye njengoko oluneenkcukacha wethu mimiselo. Misela umngcipheko enxulumene mimiselo kwi-orhwebo uxwebhu.
Amatyala - Mthetho Meko powered by-Russian abaqondisi-mthetho-Intanethi
Kwi-Mthetho Kunjalo, lonke ixesha babulala kwenzeka, babulale meko kufuneka ezenziwe sesi sibini kwi amapolisa umkhosi databaseKunjalo, okanye i-episode, soloko liqala nge omfutshane cutscene.
Kule cutscene, umdlali ifumanise phandle malunga a babulala ukususela oyintloko we amapolisa okanye ingqina, kwaye iintloko kwicandelo lomboniso ka-ukubulawa kunye zabo iqabane lakho.
Kungenjalo, umdlali kwaye zabo iqabane lakho intloko ukuba indawo, kuphela yokufumana phandle ukuba babulale sele yenzekile apho. Nangeyiphina indlela, detectives fumana clues kokubulala indawo, ezikhokelela kubo ukukhangela amanye ulwaphulo-mthetho scenes, ingxowa-ngakumbi clues, interrogating ezahlukeneyo suspects, kwaye ngenyameko analyzing ubungqina ukuze ekugqibeleni incriminate i-killer. Kwi-rare iimeko, yokuqala ulwaphulo-mthetho icandelo lomboniso okuthe nkqo ayiqulathanga i-victim ke umzimba kodwa uphando ekugqibeleni kukhokelela kwabo discovering ukubulawa kunye okanye umzimba. Ulwaphulo-mthetho Meko imisebenzi iimeko kwi-Grimsborough, kwi-Pacific Bay (hayi ukubala Wamkelekile Pacific Bay), Ehlabathini Edition (hayi ukubala ukubulawa Amanda Uthando), kwi-Iimfihlelo Elidlulileyo (hayi ukubala ukubulawa Unkskz Stanbury), kwi-Conspiracy (hayi ukubala Abafileyo kwaye Beautiful). Kukho ngakumbi iimeko kwakucwangcisiwe kuba Uhambo Ngexesha, kunye abane kubo ngoku ekubeni playable.
Ilungu states of World Trade Umbutho - Russian abaqondisi-mthetho-Intanethi
 Njengoko ka, WTO ilungu states represented
Yoqobo ilungu states of World Trade Umbutho kukho amaqela ukuba GATT emva ratifying i-Uruguay Umjikelo Izivumelwano,  European UluntuBaye bazuza oku isimo ngomhla ngokungena umkhosi ngomhla woku- kujanuwari okanye phezu zabo umhla ukwamkelwa. Onke amanye amalungu kuba bazimanya umbutho njengoko ngenxa negotiation, ubulungu iqulathe ukulingana amalungelo nezibophelelo zethu.  inkqubo ngokuba i-World Trade Umbutho (WTO) ilungu zizodwa ngamnye-sicelo lizwe, kwaye ngokwemimiselo accession ingaba dependent phezu kweli lizwe ke iqonga lophuhliso loqoqosho yangoku urhwebo regime.  I-kunikela ka-accession enikwe kanye consensus ngu ufikelele phakathi kwamalungu.  inkqubo kuthatha malunga emihlanu, ngokwe-avareji kodwa ke unako athabathe amanye amazwe phantse i-decade ukuba eli lizwe incinane kune uzinikele ngokupheleleyo kwi-nkqubo, okanye ukuba ezopolitiko imiba interfere. I-shortest accession negotiation waba elo Kyrgyzstan, lasting iminyaka kwaye zidlulileyo. I-sebenza ngokujikeleza baba elo-Russia, lasting ubudala waza zidlulileyo,  Vanuatu, lasting ubudala kwaye ngenyanga,  ne-China, lasting kweminyaka eli- kunye zidlulileyo. yehlabathi urhwebo kunye.  Georgia, yalandelwa e-algeria, kukho olungenangxaki kunye nani likhulu GDP norhwebo ngaphandle i-WTO, usebenzisa i-data.  lizwe lethu wishing uvume ukuba yinxalenye yengqungquthela WTO efake isicelo Jikelele Lababingeleli. Urhulumente nokufaka ubulungu sele zichaza ukuba yonke imiba yayo urhwebo kunye imigaqo-nkqubo yezoqoqosho ukuba kuba neziphumo kwi-WTO izivumelwano.
 isicelo ngu zingeniswe kwi-WTO kwi memocomment nto examined yi-a ukusebenza iqela vula bonke anomdla WTO Amalungu, kwaye nomngeni kunye kweli lizwe ke isicelo.
Kuba amakhulu amazwe ezifana Russia, numerous amazwe inxaxheba kule nkqubo. Kuba encinane amazwe, Quadrilateral iqela amazwe - iqulethe i-EU, i-United States, Ekhanada kwaye Japan - kwaye i-sicelo ke wayalela amazwe ingaba ngokuqhelekileyo kakhulu obandakanyekayo.  - sicelo ke lunika a oluneenkcukacha memocomment ukuba Isebenza Iqela kwi yayo langaphandle urhwebo regime, echaza, phakathi kwezinye izinto, ayo kuqoqosho, imigaqo-nkqubo yezoqoqosho, domestic ngamazwe urhwebo imigaqo, kwaye intellectual property-nkqubo.
I-Isebenza Iqela Amalungu ufake ukubhalwa imibuzo-sicelo ukucacisa imiba yayo langaphandle urhwebo regime kunye ezithile ingqalelo yokuba imali iqondo privatization kwi-uqoqosho kangakanani apho urhulumente umqathango wama-ngu ngaphaya.
 Emva zonke kuyimfuneko isiqalo ulwazi wenziwe acquired, Isebenza Umntu uza begin intlanganiso ukuze kugxila ngemiba discrepancy phakathi WTO imithetho-Sicelo ke ngamazwe kunye nelindle urhwebo imigaqo-nkqubo nemithetho. I-WP limisela imimiselo nemiqathango ngokungena WTO kuba sicelo isizwe, kwaye kucinga amalungiselelo exesha amathuba ukuvumela amazwe abanye leeway kwi ukuthobela i-WTO imithetho.  yokugqibela isigaba ka-accession ibandakanya phakathi kwala mazwe mabini uthetha-thethwano phakathi kwe-sicelo isizwe kunye nezinye Isebenza Iqela amalungu malunga concessions kwaye ukuzinikela kwi werhafu amanqanaba ukufikelela kwimakethi yempahla neenkonzo. Ezi ithetha ichaphazela werhafu amazinga kwaye ethile, ukufikelela kwimakethi ukuzinikela, kunye neminye imigaqo-nkqubo kwi-kwempahla neenkonzo.
 ngathi kweyomnga ngowama, i-WTO sele amalungu
Omtsha lwelungu ukuzinikela ingaba isicelo ngokulinganayo bonke WTO amalungu phantsi eqhelekileyo non-calulo imigaqo, nkqu nokuba ngabo negotiated bilaterally.
Ngamanye amazwi, ithetha ufumanise izibonelelo (ukwimo kumazwe angaphandle amathuba kwaye iziqinisekiso) ezinye WTO amalungu unako silindele xa omtsha ilungu izimanya nabemi.
I-ithetha kusenokuba highly enobunzima kokuba wenziwe wathi ukuba kwezinye iimeko, uthetha-thethwano ingaba phantse njengoko inkulu njengoko i-lonke umjikelo ka-multilateral urhwebo uthetha-thethwano.  Xa phakathi kwala mazwe mabini ithetha conclude, isebenza iqela finalizes i-ngokwemiqathango yecandelo accession, uthumela accession impahla, nto leyo ibandakanya kwesishwankathelo bonke WP iintlanganiso, Umthetho ka-Accession (a idrafti ubulungu treaty), kwaye lidwelisa ('schedules') ilungu kuba ke ukuzinikela Jikelele Ibhunga okanye Inkomfa Yabaphathiswa. Xa Jikelele Lababingeleli okanye Inkomfa Yabaphathiswa lilo eliya kuphumeza imiqathango yomthetho accession, umfaki-sicelo ke ipalamente kufuneka ratify Umthetho ka-Accession phambi kokuba unako lilungu.  amaxwebhu asetyenziswa accession inkqubo eziya embargoed ngexesha accession inkqubo ingaba bakhululwe xa isizwe uba lilungu.  Ye i- states iqela le GATT ekupheleni kowe, zonke kuba ukususela kuba WTO amalungu ngaphandle kuba Socialist Federal Republic of Eyugoslavia, apho waba iintsinjana ngo- kwaye waba ugxothiwe ukusuka athabatha inxaxheba GATT ngexesha.
 Ezine ezinye states, China, Lebanon, Eliberia, Aram, ukuba amaqela ukuba GATT kodwa kamva barhoxa bemka i-treaty phambi ukusekwa kwe-WTO.
 - China kwaye Israel kuba ukususela acceded kwi-WTO. Eziseleyo WTO amalungu acceded emva wokuqala wokuba WTO observers kwaye negotiating ubulungu. states of European Union ingaba dually represented, njengoko EU ngu epheleleyo lilungu lombutho. Non-sovereign autonomous amaqumrhu lelungu states afanelekile ukuba kuba ngamalungu ngokupheleleyo kwi-WTO ngaphandle kokuba baya kuba eyahlukileyo masiko territory ingxelo epheleleyo autonomy kwi-ukuziphatha zabo wangaphandle abarhwebayo ubudlelwane phakathi. Ngoko ke, Hong Kong waba GATT ukukhupha iqela, yi-ngoku kugqityiwe 'imali' umgaqo-nkqubo we-United kingdom (Sasehong Kong isebenzisa igama 'Hong Kong, China' ukusukela ngo-), njengoko benza Jordan. Omtsha ilungu le uhlobo ngu-Republic of China (Sasetaiwan), apho acceded kwi-WTO kwi, kwaye ngenyameko crafted yayo isicelo nge-ukungenela phantsi igama 'Ezahlukeneyo Masiko Territory Yasetaiwan, Penghu, Kinmen kwaye Matsu (Isitshayina i-taipei)' ngoko ke abazange asivunywanga kangangokuba Abantu ke Republic of China Omnye-China-nkqubo. I-WTO kanjalo sele nakanye states,  ukuba ngaphandle Oyingcwele Khangela kufuneka qala zabo accession uthetha-thethwano kwisithuba seminyaka emihlanu ngokuba observers. Yokugqibela lizwe ungeniswe njengoko nakanye-kuphela phambi kokuba ufake isicelo kuba epheleleyo ubulungu waba equitorial guinea kwi, kodwa ukususela ngowama- nayo kwi-epheleleyo ubulungu uthetha-thethwano. Kwi- Israel kwaye Imibalaname isetyenziswe ngqo kuba ngamalungu ngokupheleleyo.
Abanye ngamazwe phakathi koorhulumente organizations bamele kanjalo wanika nakanye isimo ukuya WTO imizimba.
 Nauru Igunya zingeniswe isicelo sephepha-WTO nakanye isimo ngo-oktobha ngo- kwaye kwakhona kwi-epreli.  Russia kwakukho enye kuphela isibini enkulu olungenangxaki ngaphandle i-WTO emva panama abaziwayo kwi.  waba iqalile negotiating ukungena WTO ke predecessor ngowe. Yokugqibela enkulu incopho wembambano - enxulumene Russo-isigeorgia Imfazwe - waba isonjululwe ngokusebenzisa mediation yi-Senegal,  ezikhokelela Russian ubulungu ngo. Enye ufumana Georgia, ebizwa i-nakanye urhulumente kwaye iqalile uthetha-thethwano ngo. Le thebhule ilandelayo uluhlu zonke ngoku amalungu, babo accession umhla ongaphambili GATT ubulungu.  zilandelayo itafile uluhlu zonke WTO observers.  Kwisithuba seminyaka emihlanu yokuba wanika nakanye isimo yi-WTO, states ezifunekayo ukuze begin negotiating zabo accession ukuba umbutho.  zilandelayo itafile uluhlu bonke UN ilungu states kwaye UN nakanye states eziya ndivuma amalungu okanye observers ye-WTO.
Ixilongo layo ex-aide Manafort ke lawyer bafune dismissal ka-oligarch ke lawsuit - Reuters
(Reuters) - lawyer wayekhusela U.S
Umongameli Donald ixilongo layo ngu yangaphambili phulo umphathi Upawulos Manafort ngokuchasene Russian oligarch ke allegations zobuqhophololo uza kufuna ukuba yonke imihla kunjalo, wathi ngomhla ngomvuloJeffrey Eilender argued i-amabango ingaba kakhulu ubudala kwaye portrayed ityala njengoko i-umzamo divert ingqalelo ukusuka federal xilonga kufutshane kwi-Russia ke alleged meddling kwi- unyulo. Eilender ndenza izimvo ukuba Reuters ukulandela kokuva kwimeko, zasekuhlaleni umcimbi lowo ezahlukeneyo ukusuka nezimangalo faced yi-Manafort, owokuqala intloko ixilongo layo ngu phulo, njengenxalenye Ezikhethekileyo Ingcebiso Urobert Mueller ke federal xilonga kufutshane. Eilender ke izimvo iphawulwe okokuqala ukuba Manafort ke abaqondisi-mthetho kuba oluneenkcukacha zabo kwakucwangcisiwe impendulo kwi-isuti ezenziwe sesi sibini ngojanuwari Enew York urhulumente inkundla ngumthetho a Ecyprus inkampani iqinisiwe ukuba Oleg Deripaska, i-aluminum magnate ekuthatheni Russian Umongameli Vladimir Putin.
Eilender wathi ebeya kufuna ukuba yonke imihla ityala kwi emidlalo ukuba bebe ngaphezu ezintandathu ubudala - statute ka-kwemida kuba ubuqhetseba Enew York - ukususela imali ngalo mba itshintshe izandla.
yezigidi earmarked kuba uya kufumanisa kwi-Ukraine ngo
Eilender wathi bakholelwa Deripaska waba ezama ukuba reassert isemthethweni amabango ngokuchasene Manafort kwaye yangaphambili ishishini iqabane lakho Rick Amasango ngexesha xa-mali eyenziweyo abantu ekuthatheni Putin baba phantsi ngamandla scrutiny. Uyakobi Altman, lawyer kuba Ecyprus inkampani, Surf Ulundiname Limited, akazange siphendule a isicelo kuba izimvo. Surf Ulundiname umtyholwa Manafort kwaye Amasango kwi-januwari lawsuit ka-misappropriating ngaphezulu kune $. Surf Ulundiname yamenza efanayo isemthethweni izikhalazo ngokuchasene Manafort kwaye Amasango kwi-isicatalanname ngo, kwaye Virginia ngowama. Akuvumelekanga cacisa ntoni kwiqondo elithile, ukuba ikhona, Mueller ke xilonga kufutshane ngu-focused kwi Deripaska, owaye wanikela private briefings yi-Manafort ngexesha phulo, ngokunxulumene comment ingxwaba Ngeposi. Enye inkampani cited kwi-Mueller ke indictment ka-Manafort kwaye Amasango njengoko ekubeni abakwicandelo i-alleged imali laundering kwaye tax evasion scheme kokuba i - $ ezingama-mboleko evela Deripaska-okunxulumene inkampani ekupheleni ka, Ecyprus corporate iimbali bonisa.
Wokugqibela kwinyanga Amasango pleaded benetyala ezimbini imirhumo kwaye cooperating kunye Mueller.
Manafort maintains yakhe innocence kwaye ilungiselela etyaleni. I-yahlula wadala a enokwenzeka ungquzulwano inzala kuba Eilender, owaye wanika imvume yi-umgwebi kwi-umvulo ukuya okanye Amasango njengoko umxhasi kwaye kuqhubeka nto Manafort.
Nephepha ka-ukhathalelo iimveliso neenkonzo kwi-Russia - Ltd 'Umgangatho'
ভূমি বিরোধ মস্কোর, সেট বিপজ্জনক নজির - এমপি - স্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল